Brezila: Reharehan’ny ‘Hétéro’ sa Tsy Fandeferana ny ‘Homo’? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Aogositra 2011 10:00 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, македонски, Español, Português
Ny 2 Aogositra 2011, ny filankevitry ny tanànan'i Sao Paulo, Brezila, dia nametraka Andro Ho An'ny Tsy Mitovy Mifanambady, hetsika iray hankalazaina isaky ny Alahady fahatelo amin'ny volana Desambra. Io tetikasa io, tolo-kevitra avy amin'ny mpanolotsaina kristiana evanjelika, sady mpanohitra mafy ny zon'ireo mitovy nefa mifanambady [pt] Carlos Apolinario, avy amin'ny Antoko Demaokraty (DEM), dia nekena tanaty fivoriambe nandritra ny fifidianana sarintsariny natao izay mametraka mialoha ny fandaniana azy tsy miankina amin'izay vokatra marina ho azo avy eo, izay tamin'ity tranga ity dia nahitàna mpanolotsaina 20 nitsipaka ary 19 nanaiky.
Taorian'ny fanambaràna ny fahalaniany, hatezerana sy fahasorenana no nameno ny tontolon'ny fitorahana bilaogy sy Twitter. Ireo mpampiasa aterineto, mitovy nefa mifanambady (Gay), hatramin'ireo manaraka ny lalàn'ny natiora (hétéro), dia toa samy naneho ny tsy hafalian'ny amin'ny fametrahana ilay andro daholo izay, ho an'ny maro, midika fanamafisana ny onjam-pankahalàna ny tsy mitovy amin'ny tena izay mahazo vahana eo amin'ny firenena.
Kisary nataon'i Carlos Latuff, azo ampiasaina malalaka
Fisoloana vava sa tsy fandeferana?
Araka ny hevitry ny maro amin'ireo mpampiasa aterineto dia tsy misy dikany ny hanokànana andro iray ho anà maro an'isa ara-tsosialy izay tsy nizaka akory zavatra tsy rariny. Ilay mpampianatra, Tulio Vianna, dia mihevitra hoe [pt] :
Rehefa manao ny “gay pride parade” ry zareo mitovy nefa mifanambady dia manome haja ny fironana ara-nofon-dry zareo. Rehefa ny olona ara-dalàna no mba hanao ny “straight pride parade” dia hoe maneho ny tsy fandeferan-dry zareo ny fironana ara-nofo hafa.
Juliana Freitas, mafana fo koa, dia nanontany [pt] izay ilàna ny “fitakian'ireo hétéro” ka naleony miantso ilay “Andro natokana ho an'ireo manaraka ny lalàn'ny natiora” hoe “Andron'ny Henatra”, indrindra noho ny fahitàna fa tsy nisy tranganà herisetra notaterina hoe nihatra tamin'ireo noho ny fironany ara-nofo.
Lola Aronovich, mpampianatra sady mafàna fo amin'ny fiarovana ny vehivavy, dia mandinika [pt] mikasika io foto-pisainana io :
Saino ny tombon-dahiny azon'ny olona hétéro iray. Oviana no farany nahatsiarovanao henatra noho ny maha ‘hétéro’ anao? […] Oviana no nanavakavahana anao satria hoe hétéro? […] Ny fireharehana amin'ny maha-hétéro dia fitadiavana ny hankalàza ny vintana nanànana tamin'ny nahaterahana fotsiny ho hétéro. […] Tsy misy olona handàka anao hivoaka ny trano, tsy misy olona hidaroka na hamono anao ho faty, tsy misy olona mikatsaka ny hanova anao, tsy misy olona hiteny hoe henatra ho azy ny maha-ray na reny niteraka anao, tsy misy olona hisaina hoe ny fironan'izy ireo ara-nofo dia maharikoriko na hampifandray azy amin'ny resaka fametavetana zaza, tsy misy olona handroaka anao amin'ny asanao noho ny maha-hétéro anao, tsy misy olona hiteny fa izay ataonao dia heloka ary dia ho may any amin'ny helo ianao noho izany.
Ho an'ilay mafàna fo João Pedro, ny eritreritra tahaka itony “Hetero Pride Day” itony dia manamafy sy mandrisika fotsiny ny herisetra ateraky ny fanavahana ny tsy mitovy amin'ny tena, hitondra ratra sy fahafatesana ho an'ireo Lehilahy na vehivavy mitovy nefa mifanambady, ho an'ireo sarindahy sy sarimbavy”, tahaka izay anasongadinany azy [pt] :
Isaky ny roa andro, misy telo amin'ireo olona mitovy nefa mifanambady no maty misy mamono any Brezila noho izy ireo fotsiny hoe ‘Gay’. Tsy misy olona ara-dalàna namoy ny ainy na niharan'ny herisetra ara-tsaina na ara-batana noho io fironana ara-nofo io fotsiny.
Ilay mpanao gazety, Liuca Yonaha, ao amin'ny bilaogy O filtro (Ilay fitantavànana), dia mamerina mamoaka [pt] ny “fanamarinana” naroson'ilay mpanolotsaina Apolinário momba io tolo-dalàna io izay mifantoka betsaka indrindra amin'ny fanasaziana ny zo ho afaka maneho fitiavana eny imasom-bahoaka sy any anaty fahitalavitra :
Mety ho azon'ny olona roa mifanambady ve ny hoe hahatakatra ny zo hanana fahalalahana tahaka ny hoe misy lehilahy roa be volombava miditra trano fisakafoanana iray ary mifanorokoroka tsy misy firaharahàna velively an'ireo mpanjifa hafa ao amin'ilay toerana?
Tokony hitondra tena am-pahamendrehana ry zareo eny anivon'ny fiarahamonina ka hamela ny fifanorokorohana sy ny fanehoam-pitiavana ho any amin'ny toerana manokana ho azy ireo any na any an-tranony.
Ny hita dia hoe tsy ampy ho an'ireo olona mitovy nefa mifanambady ireo ny ankafinafina ka mba hisarihana ny saina ho fanombohana ny fitakian-jo izay na ny olona ara-dalàna aza tsy manana azy; dia mitondra tena toy ny gaigy sy matetika manao teny manafin-tohina an'ireo izay tsy mitovy fisaina amin-dry zareo, ary avy eo dia manantena fa hanaiky an'io fitondran-tena io ny fiarahamonina.
32 taona ny tokantranoko, nefa na izany aza tsy mbola nihevitra mihitsy aho ny hoe manana zo hanorokoroka ny vadiko eny imasom-bahoaka mba hanehoako ny fitiavako azy.
Enjehina noho ny fankahalana ny hafa, niaro ny tenany ilay mpanolotsaina, amin'ny filazàna[pt] fa ny mpanety volony sy ny mpanao ankosotra azy dia samy ‘gay’ avokoa ary ny ady ataony dia manohitra fotsiny ihany ny “tombon-dahiny” angatahan'ireo olona ‘gay’ izay mitady hihoatra ny zo ananan'ny tsirairay.
@Apolinario_SP: Mpanolotsain'ny tanàna ao SP [Sao Paulo] dia nanaiky ilay tetikasako hametraka andro iray ho an'ny Hétéro. Manaja ireo olona ‘gay’ aho, saingy manohitra kosa ny fihoaram-pefy sy ny fanomezana tombon-dahiny manokana. http://migre.me/5pq8l
Tao amin'ny Twitter, ny mpampiasa sasany toa an-dry Shara Maia (@SharaMaia1) sy João Pedro (@joaopedrocrf) dia nanohana ilay tetikasa tamin'ny fampiasàna ny tenifototra #diadoorgulhobabaca (Andro Fireharehan'ny Kaondrana). Fifanakalozan-dresaka nateraky ny bitsika iray nalefan'ilay mpianatra, Isabella de Amorim, izay niafara tamin'ny fandraisany fanapahan-kevitra hamafa azy io:
@isabellacbsa: Ary raha toa moa ka ho an'ny fitovian-jo ilay izy, dia ENY tokony hasiana ny andro fireharehan'ny hétéro, efa hita rahateo fa misy ny andro fireharehan'ireo ‘gay’. #diadoorgulhobabaca
Rosangela Basso, avy ao amin'ny bilaogy Maria da Penha Neles dia manolo-kevitra [pt] miaraka aminà esoeso:
"Fanamelohana ny Fankahalana ny Hafa". Sary azo ampiasaina malalaka.
Ireo andro fireharehana hafa tokony hoforonina:
- andro fireharehan'ny fotsy
– andro fireharehan'ny sembana ara-batana
– andro fireharehan'ny mpanavakavaka ara-pihaviana
– andro fireharehan'ny mpanan-karena
– andro fireharehan'ny mpankahala ny tsy mitovy aminy
Ao amin'ny Twitter, ilay mpitoraka bilaogy an-dahatsary PC Siqueira (@pecesiqueira), ilay mpanatontosa sarimihetsika, Otávio Ugá (@otaviouga) ary ilay mpanao gazety, Daniel Lélis (@danlelis) koa dia samy nisafidy ny hanihany ho entina manakiana :
@pecesiqueira: Satria manaraka tsara ny lalan-tsaina ny hoe isika, olona manaraka tsara ny lalàn'ny natiora ary niaritra teritery sy endrikendrika teny am-pamakivakiana ny tantara, dia mila andro iray hanamafisantsika ny toerana misy antsika.
@otaviouga: @pablovillaca Tena tia tena ry zalahy mitovy nefa mifanambady ireo. Ndao koa mba hiady ho an'ny zo sivily eo amin'ny fikambanan'ny samy ‘hétéro’ mitovy sokajy! Reharehan'ny Hétéro.
@dannlelis: Lany ny Andro ireharehan'ny Hétéro. “ela ny ela” ka afaka handeha sy hifampitantana ary hifanorokoroka imasom-bahoaka eny an-dalamben'i Sao Paulo ny hétéro. Milay ilay Apolinario!!
Ao amin'ny YouTube, lahatsary iray avy amin'i izaiaspcjr no manakiana ny famoronana ilay Andro Fireharehan'ny Hétéro :
Tsy maintsy ankatoavin'ny Ben'ny Tanàna, Mayor Gilberto Kassab, ilay tetikasa mba ho lasa lalàna. Conceição Oliveira dia manantena [pt] “fa mba misy singanà fahamendrehana ihany tavela ao amin'i Kassab ary hametraka ny didiny tsy azo ivalozana hanohitra ny andro adala tahaka izany izy”. Ilay mpanolotsaina, Jamil Murad, ao anatin'ny bilaoginy dia namoaka [pt] lahatsoratra iray mitsikera ny fankatoavana ilay hetsika sy ny fankahalana ny tsy mitovy amin'ny tena amin'ny ankapobeny.
Ny ‘Orgulho Hétero’ (Fireharehan'ny Hétéro) sy ny tenifototra #diadoorgulhobabaca (Andro Fireharehan'ny Kaondrana) dia lohahevitra noresahana betsaka tao Brezila ary nahangona mpaneho hevitra manohitra ny lalàna efa ho an'arivony maro. Ilay mpikambana ao amin'ny Kaongresy Federaly (sy Evanjelika) Eduardo Cunha (PMDB-RJ), fantatra fa hoe nanolotra volavolan-dalàna iray izay manameloka ny “fankahalàna ny tsy mitovy amin'ny tena” [pt] ary noho ny fanoherany ny zon”ireo ‘gay’ dia nanambara [pt] fa hanome soso-kevitra hanaovana androm-pirenena iray ho fireharehan'ireo hétéro.
Ity ny fanangonan-tsonia iray ao anaty aterineto [pt] mangataka an'i Kassab hampiasa ny vato tsy azo ivalozana amin'ilay tetikasa; ilay mpikambana ao amin'ny Kaongresy Federaly, Jean Wyllys, dia nanentana [pt] handresen-dahatra ny ben'ny tanàna mba tsy hankato volavolan-dalàna tahaka izany.